MAQAALLO — Gebo Gebo News
Khilaafka ka dhex taagan golaaha wasiirada iyo kala maqnaanta guddida abaaraha ee heer qaran +halka uu salka ku hayo
Madaxwaynaha mustaqbalka isagoo ilaalilanaya xeerarka iyo qawaaninta xisbiyada iyo qaranka u dagsan waxuu inta badan cabiraa dareenka shacabka ee ku aadan dhaliilaha jira. Waxaa soo baxaya khilaaf xoogan oo udhaxeeya golaha wasiirada, khilafkasoo ku saabsan abaaraha, waxaynu ogsoonahay in abaar xun ay dadkan ragaadisay, muddo 4 bilood ahna ay ahayd […]
March 19, 2017, 4:13 pm
Dhambaalkii murugda iyo mugdiga xanbaarsana maalmihi qadhaadh “”Geerdii maxamed bay sheegyaan gacal ha wayane””
Bismi Laahi Raxmaani Raxin Waa maalintii Muruguda Iyo Mugdiga Xanabaarsanay Mud ay ka soo wareegen 12 sano ayaa maalin maalah ka mid ahaa la keenay meel laygu yidhi wax barshaa laga dhigtaa runtii waxaan ahaa qof aad u yar waxaan arkayay oo qudha waalid farxasan iyo caruur faraxsan oo ciyaarsaya […]
March 18, 2017, 12:56 pm
Wasiirka kamid ah wasiirada ugu tunka wayn xukumada axmed Silaanyo oo u ololaynaya arin ka dhan ah xukuumada iyo xisbiga, wasiirkasoo raacaya wadadii Xirsi.
Madaxwaynaha mustaqbalka isagoo ilaalilanaya xeerarka iyo qawaaninta xisbiyada iyo qaranka u dagsan waxuu inta badan cabiraa dareenka shacabka ee ku aadan dhaliilaha jira. Bulshada ku xiran maqaalada madaxwaynaha mustaqbalka waxay uga barteen qoraalo leh arraar balse waxii maanta ka danbeeya waxaynu toos u guda gali donaa dulucda hadalka waxuu […]
March 18, 2017, 9:02 am
Cali Khaliif Galayr,Taariikh Wacan Uga Dagi Doonnaa Dadka Ka Danbeeya.
mudane galaydh waa nin u dhashay jamhuuriyadda Somaliland,isla markaasina ah ninka magac dheer leh,geyiga sooamaalida,waana aqoonyahan calanka ugu sita dhamaan dhulka soomaalida, ,wuxuuna nasiib u helley inuu xillal iyo magac iyo is huwan kazoo hooyo intii u ku gudda jirey hayaanka noloshiisa.haa. in baddan wuxuu samaytay jabhaddu uu markaa […]
March 18, 2017, 8:20 am
Ma La Socotaa In Saddexdan Wiil Ay Yihiin Kuwa Caadaystay Isku Dirka Iyo Ceebaynta Shacbiga Somaliland Iyagoo Adeegsanaya Shebekadahan
Dhawaanahan waxa ku soo badanayey dalka wiilal qalad fahmay saxaafada oo magic iyo manfac ka dayey ku macaashida cayda shaqsiyaad aan geyin ama aan galabsan cay lagu waxyeelaynayo melgahooda dadnimo iyo muslinimo intaba. Waxaan halkan idinku soo gudbindoonaa kuwa ku gabanaya mihnada saxaafada balse karaamada ka qaaday qiimihii ay lahaan […]
March 18, 2017, 8:03 am
Ganaaxii Igu Dhacay iyo Go’aankii Taliyaha Ciidanka Ilaalada Waddooyinka Somaliland
abaarro 9:00 subaxnimo oo aan ka baxay xafiiskayaga, waxaan tagay faras magaalaha Hargeysa oo aan alaab ka soo iibsanayay. Maadaama oo aan degdegayay waxaan baabuurkaygii dhigay meherad cidhiidhi ah oo ku dhinac taalla jidka labada haad ah ee samxadda badan ee ka baxa Khayriyada Hargeysa ee halkaas kaga dhaca […]
March 15, 2017, 5:29 am
Dar-leef :- Wasiirka Macdanta Arinkiisu Ma Waa Jiilaal Ee Ha La Jilaabtaa..!
Macnawiyan, mucaaraddadu maaha mabda’ ka indho-saaban wanaagga iyo waxtarka horumarka balse waa summad baadisooc oo lagu tilmaamsado aragtida tolmoon ee saxaysa amase farta ku fiiqaysa waxa qaloocday ee qaldamay isla markaana ku badhitaaraysa qorshe kale oo ka qumman ka hore ee wax qaldaya. Xaasha ! Marnaba Suurtogal maaha darleefnimo […]
March 15, 2017, 5:16 am
waa kuma salaanka loo fulo sanaag bari
waa kuma salaanka loo fulo sanaag bari qori cideedka lagaag talabo cida iyo dhiidhiga hortaal xukumad siilanyo kagan aadan dhibatoyinka gobolad bariga somaliland gaar ahaan sanaag bari wax halaakeyey abaaro aad uu daran biyo la.aan baahi baad iyo xanuuno dadka sameeyey ma haystan cid uu dhaqdhaqaad waayo wax xukumada […]
March 14, 2017, 1:51 pm
Tariikhda uu baxay magaca IIDOOR (Isaaq) iyo halka uu kasoo jeedo,yaase bixiyay?W/Q.Khadar Aar
Tariikhda uu baxay magaca IIDOOR (Isaaq) iyo halka uu kasoo jeedo,yaase bixiyay?W/Q.Khadar AarMagac bilaash uma baxo,Somaliduna sideedaba waxa ay caan ku tahay bixinta iyo ku dhajinta magaca ama Naanaysta qof ama qolo loogu yeedho; wali wax ma iska waydiisay magaca la yidhaa IIDOOR oo loo yaqaano Qabiilka Reer Sheekh […]
March 14, 2017, 1:43 pm
Maxaa U Dhaxeeya Baggiyada Islaamiga Ah Iyo Banggiyada Ganacisga (Ribawiga Ah)
Waa maxay Banggi Dul-saar leh (Ribo) Conventional Banks? Waa maxay Banggi islaamiya? Maxa u dhexeeya Baggi Islaamiya iyo Baggi Ribawi ah? Banggiga Ribada ah (Baggiyadda Ganacsigga) ma kadaloob dhaqaaluu kena mise koboc dhaqaale? Waa maxay Muraabaxaddu? Maxaa la gudboon ummada Reer Soomaaliland? Haddii anu si kooban uga war bixino kalmadda […]
March 13, 2017, 8:02 am